पहिलो चरणको कोरोना खोप १ लाख ८४ हजार भन्दा बढीले लगाए , कुन प्रदेशमा कति (बिस्तृतमा) #Covidvaccine • Health News Nepal
काठमाडौं, २५ माघ २०७७
पहिलो चरणको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको खोप १ लाख ८४ हजार ८५७ जनाले लगाएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमका अनुसार भारत सरकारले उपलब्ध गराएको खोप ‘कोभिशिल्ड’ देशभरका २०१ खोप केन्द्रबाट एक लाख ८४ हजार ८५७ जनालाई दिइएको छ ।
मन्त्रालयले यही माघ १४ गतेदेखि पहिलो चरणमा कूल जनसंख्याकाे तीन प्रतिशतलाई खोप लगाउनेमध्ये प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिलाई खोप प्रदान गरेको थियो । खोप अभियान शनिबार सम्पन्न भएको थियो । मन्त्रालयले पहिलो चरणका लागि ल्याइएका खोप प्राथमिकताका आधारमा अर्को चरणमा लगाउने भएको छ ।
नेपालमा कूल जनसंख्याकाे ७२ प्रतिशतलाई खोप लगाउने सरकारको योजना छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले कुनै अवाञ्छित घटना नभई खोप अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको बताए । भारत सरकारले अनुदानमा १० लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराएको थियो । यस्तै चीन सरकारले पनि नेपाललाई पाँच लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउने भएको छ ।
Tags: #government of Nepal#Health and population ministryCorona Virus #Covid19Dr.jageshor gautamFarwestrn-nepal
सोमबारबाट कोभिड खोप कुटनीतिक नियोगका कर्मचारी र पत्रकारलाई दिइँदै #Covidvaccine
लिभर ट्रान्सप्लान्ट सर्जन डा. भण्डारीको स्वरमा प्रधानमन्त्रीको शब्दमा “बन्छ नमुना नेपाल ” गित सार्वजनिक